Madaniga 3D - Bogga 2 - Geofumadas
Liiska Barnaamijka Waxaan dib u eegay
Waxaan dhowaanahan ka hadlayey waxa ay uga dhigan tahay tirakoobka in laga hadlo softiweerka, gaar ahaan 11 barnaamij oo matalaya 50% booqashooyinka ereyga muhiimka ah. Way adag tahay in la bixiyo talooyinka software-kee ka fiican, maxaa yeelay waxay kuxirantahay duruufaha duruufaha kaladuwan (iyo lacagta), waxa ugufiican ee aan rajeyn karo waa inaan qoro oo aan dhiibo dareenkeyga;
Bentley Systems blog 3D Dwg Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah My aragti ugu horeysay QGIS
Labadii cashar ee hore waxaan ku aragnay sida dhibcaha loo soo waarido loona qaabeeyo. Hadda waxaan dooneynaa inaan isku waafajino qodobbada lagu calaamadeeyay saldhig ahaan. Abuur polyline Taas awgeed, waxaan u adeegsannaa amarka polyline waxaanna u isticmaalnaa amarka snap-ka noodhadhka. Waxaan ka dhaqaaqeynaa saldhigga hore illaa kan ugu dambeeya. Abuur isku xidhka Si ...
Qoraalkii hore waxaan ku aragnay sida loo soo dhoofiyo qodobbada, hadda waxaan arki doonnaa sida loo kala shaandheeyo si loo helo fikrad ka wanaagsan waxa aan haysanno. Dhibcaha aan hayno waxay leeyihiin astaamaha soo socda: FENCE, CORRIDOR, GAP Kadib inta soo hartay waxba ma hayaan, marka waxaan u qaadaneynaa inay tahay dhul dabiici ah waxaana sidoo kale jira qodobada udubka dhexe ...
3D madani ah, naqshad jidka, cashar 1
Waxaan codsi ka helay saaxiibkay oo ka shaqeeya waddo ku taal dhulka Patepluma; Sida muuqata isagu wuxuu leeyahay Land Desktop markaa wax yar ayaan uga duwanaan doonaa maaddaama waxa aan haysto ay yihiin Civil 3D 2008 laakiin maxay macno leedahay. Just for nostalgia, tani wax badan ayey ka fududeyd CivilSoft (Autocivil markii hore markii hore ...
Mashruucyada Isku-dhafka leh ee AutoCAD 3D
Waa mid ka mid ah ilaha ugu dhameystiran ee Isbaanishka ah ee aan ku arkay Civil 3D, waxaan ku ogaaday iyada oo loo marayo Cartesia Forum waxayna iila muuqataa in marka lagu daro Kheyraadka AUGI ay ku dhowdahay in la barto Civil 3D. Waxaa dallacsiiyay ApliCAD oo sida muuqata iska kaashaday tarjumaadda ...
Xogta shaxda ee shaxda 3D
Arbacadan, Abriil 15, 2009, webcast cusub oo loo yaqaan 'Civil3D webcast' ayaa lagu qaban doonaa maareynta xogta dhulka, oo ay ku jiraan soo dejinta xogta, jiilka meelaha dusha sare iyo qaybaha iskutallaabta. Tani waa inaad iska diiwaangelisaa, leedahay xiriir xushmad leh oo aad tagtaa inta u dhexeysa 12 iyo 13. Soo dejinta, naqshadeynta iyo dhoofinta ...
From Excel ilaa AutoCAD, marna ma fududa
Hore ayaan uga hadalnay mowduucan kahor, xaqiiqdii, waxaan sameynay soo koobid kuwa ugufiican, laakiin waan iska ilaalin kari waayey jirrabaadda inaan ka hadlo nooc fudud oo aad u fudud oo isticmaale uu soo galiyay golaha Cartesia si sax ah maanta. Waa warqad fudud oo 'Excel' ah oo leh tiirar ay ku galaan xogta, ...
3D Xafiiska dilaaga ah
Naqshadaynta dhirta qoraxda leh ee AutoCAD 3D
Webcast ayaa la shaaciyey si looga barto adeegsiga AutoCAD Civil 3D ee dhirta qoraxda. Tani waxay noqon doontaa Maarso 26, 2009 duhurkii (12 illaa 13 saacadood, waqtiga Madrid waan qiyaasayaa) waxyaabaha ku jirana waxaa ka mid ah: Abuuritaanka Habka Digital Terrain Model (DTM). Falanqaynta MDT iyada oo loo marayo astaamaha mudada dheer iyo ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, tabo cusub
Sida loo abuuro cilaaqaadyo leh AutoCAD Macaamiisha 3D
Waqti dheer ka hor, tan waxaa lagu sameeyay Softdesk, sheeko kale, laakiin kiiskan waxaan arki doonaa sida loo sameeyo iyadoo la adeegsanayo AutoDesk Civil 3D lix tallaabo. 1. Noocyada dusha sare Styles waa joomatari iyo goob bandhig oo lagu abuuray AutoCAD, halkaas oo nooca khadadka, midabada, lakabyada, jilicsanaanta gooladaha ama kaladuwan ...
AutoDesk 3D Dwg egeomates My
AutoCAD madani 3D, dhibcaha soo dejinta ee ka soo baxa macluumaadka dibadda
Mashruucan waxaan ku arki doonaa sida looga soo dhoofiyo xogta keydka bannaanka, in kasta oo ay tahay inaan tixgelinno dhinacyo dheeri ah oo ku saabsan maaraynta qodobbada. Waxaan ku saleysnaan doonnaa tusaalaha ay keento casharka 3D-ga ah ee madaniga ah, iyadoo la adeegsanayo feylasha dhibcaha-1.dwg iyo points.mdb, dhamaadka waxaa jira xiriiriyeyaal lagu soo dejinayo Abuur Furayaal Faahfaahin Hadafka ...
Dhimashadii SAICIC kadib, barnaamijyo dhowr ah oo reer Mexico ah ayaa la wareegay suuqan, oo ka kooban mid ka mid ah aagagga injineernimada ee markii ugu horreysay iswada. Waxaan xasuustaa in mararka qaar aan baray koorsada kharashka, waana lagama maarmaan in la tijaabiyo codsiyada kala duwan (oo la heli karo maalmahaas), sida NewWall, Opus, Champion iyo Neodata. Kan dambe ayaa ii muuqday ...
Faylasha qaabeed, ee loo yaqaan faylasha .shp, waxay noqon doonaan qaabab afar geesood ah marka laga hadlayo teknolojiyadda laakiin kama fogaan karno inay u caan baxeen sida ugu badan ee ArcView 3x ay ahayd. Tani waa sababta ay wali si ballaadhan loogu adeegsado, illaa heer inta badan dhufto ee geospatial ay soo saareen jadwal ay kula shaqeeyaan. ...
ArcView Map-ka AutoCAD Bentley Systems 3D Dgn ESRI GvSIG OS SHP
Samee sanduuqa xaraashka leh ee AutoCAD Macaamiisha 3D
Waxaan xasuustaa in muddo ka hor aan ka hadlayey sida tan loogu sameeyo Softdesk, waxaan sidoo kale aragnay qaar ku mashquulsan inay ka soo horjeedaan miiska lagu dhisay Excel. Xaaladdan oo kale waxaan ku samayn doonaa AutoCAD Civil 3D, oo ah midowga Khariidadda AutoCAD iyo AutoCAD Civil 3D. Dhanka kale, deegaanku waa mid aad ...
Baro AutoCAD Civil 3D, kheyraad qiimo leh
Inaad xubin ka noqoto AUGI MexCCA waxay leedahay faa iidooyin badan, midkoodna waa helitaanka aalado ama casharro lagu barto. Xaaladdan oo kale waxaan soo bandhigayaa soo koobid ka mid ah casharradii ugu fiicnaa ee loo adeegsaday madaniga 3D ee waddooyinka, jaangooyooyinka iyo geospatial Qaarkood waa fiidiyowyo, qaarna waa faylal pdf. Waxaad u baahan tahay in lagaa diiwaan geliyo ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, Engineering, topografia
AutoDesk waxay soo bandhigi doontaa webcast codsiyada loogu talagalay qorshaynta magaalooyinka, dhismaha iyo shaqooyinka madaniga ah Diisambar 18 iyo Janaayo 29, 2008. Muddooyinkan dambe waa kan khadka tooska ah iyo waqtiga dhabta ah lagu ogaanayo waxqabadka barnaamijka, xaaladdan markay tahay wararka alaabta, waxaad sidoo kale ka qaybqaadan kartaa ...
Waa maxay Cusub ee AutoCAD 3D 2009
AutoDesk waxay fidineysaa casuumaad si loo muujiyo waxa ku cusub madaniga 3D ee nooca 2009, labadaba xalalka qorshaynta magaalooyinka iyo dhismaha iyo shaqooyinka madaniga ah. Bandhigani wuxuu noqon doonaa khadka tooska ah, waana bilaash saacad ... iyo tan ugu fiican, Isbaanishka !!! Si tan loo sameeyo waa inaad doorataa webcast-ka ku jira ...
AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering
Dhiirigelinta toosan oo leh rabitaan wanaagsan si aad u gaarto Hispanics
Tan iyo markii la furay AUGIMexCCA, (oo u taagan Kooxda Caalamiga ah ee adeegsadayaasha AutoDesk ee Mexico, Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka) iyo ka dib markii la bilaabay bishii Sebtember ee sanadkii hore, waxaan aragnay ujeedo wanaagsan oo ka socota AutoDesk oo ah inay soo gasho adduunka aan ka hadlayno ñ iyo waxaan ku cunnaa tortillas avokado. Waxay noo muuqataa tilmaam wanaagsan, in ...
AutoDesk 3D Google Earth